आफनै मातापिताले मिलेर गराए बच्चाको यो हाल, अनुसन्धानमा खुल्यो डरलाग्दो कारण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आफनै मातापिताले मिलेर गराए बच्चाको यो हाल, अनुसन्धानमा खुल्यो डरलाग्दो कारण
किभ। युक्रेनमा आफ्नो ४ वर्षको छोरालाई कैयौं दिनसम्म भोकै राखेर उसको ज्यान लिने प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । ती व्यक्तिलाई शंका थियो कि ती छोरा उनका सन्तान होइनन् । यही कारण ती व्यक्ति छोराको ज्यान लिन चाहन्थे । तर, जाँचका क्रममा उनको शंका गलत साबित भयो । अर्कोतर्फ यो सबथोक देखेर पनि चुपचाप बस्ने बालककी आमामाथि पनि हत्याको प्रयासको मुद्दा चलिरहेको छ ।
जब उद्धार टोलीले ४ वर्षका यी बालकलाई फेला पारेको थियो त्यतिबेला उनको हालत निकै खराब थियो । उनी सुकेर सबै हड्डी बाहिर देखिएका थिए र झिंगा भन्किरहेका थिए । यो घटना गएको अगष्टमा युक्रेनको शहर नोभोक्रेइंकामा भएको हो । एक सामाजिक कार्यकर्ताको उजुरीपछि पुलिसले घरमा छापा मारेको थियो । त्यहाँ उनीहरुले ४ वर्षका बच्चा भेटेका थिए जसको हालत निकै खराब थियो । बच्चाको ज्यान बचाउनको लागि पुलिसले ढोका फोडेर भित्र पसेको थियो । डाक्टरका अनुसार बच्चाको हालत यति खराब थियो कि उनको त्यतिबेला उद्धार नभएको भए १–२ दिनमै उनको मृत्यु हुन्थ्यो ।
भ्लादिक मोल्चेंगो नामका यी बालकलाई कैयौं दिदेखि खाना दिइएको थिएन । उनको शरीर सुकेर हड्डी देखिएको थियो र तौल घटेर ७ किलो भएको थियो । बच्चालाई काठको पिंजडामा थुनेर राखिएको थियो र उनको शरीरभरी आफ्नै दिसा टाँसिएर सुकेको थियो । जब पुलिसले अनुसन्धान गर्दै गयो उनको यो हालत उनका आफ्नै पिताले गराएको पत्ता लाग्यो । सोधपुछमा ती व्यक्तिले भने कि उनलाई यो बच्चा आफ्नो नभइ पत्नीको नाजायज सम्बनधबाट जन्मेको भने लागेको थियो । यही कारण उनी बच्चालाई मार्न चाहन्थे ।
बच्चालाई उद्धार गर्ने टिमका एक सदस्यका अनुसार बच्चालाई जुन पिंजडामा कैद गरिएको थियो त्यहाँबाट उनी पूरा कोठा पनि देख्न सक्दैनथे । ब्लादिकका पिता अलेक्जेण्डरलाई आफ्नी पत्नी नतालियामाथि शंका थियो । भ्लादिकका अलावा यो दम्पतीका तीन छोरी पहिल्यै थिए । तर, पछि जब बच्चाको डिएनए परीक्षण भयो त्यसपछि यो प्रस्ट भयो कि अलेक्जेण्डरको शंका गलत थियो, बच्चा उनकै थिए । अभिभावक जेल गएपछि भ्लादिक र उनका तीन दिदीहरुलाई अनाथालय पठाइएको छ । अहिले भ्लादिकको अवस्थामा निकै सुधार भएको छ र उनको तौल १५ किलो भएको छ ।